January 24, 2021 - Hargeele - Wararka Somali State
Cayaaraha January 24, 2021
(Manchester) 24 Jan 2021. Manchester United ayaa garoonkeeda Old Trafford ku garaacday kooxda Liverpool, kaddib markii ay kaga adkaatay 3-2, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada wareega afaraad ee tartanka FA Cup-ka. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbardhac 1-1 ah ay isku mari waayeen labada kooxood Manchester United iyo Liverpool. Daqiiqadii 18-aad Liverpool Sii akhriso
(Elche) 24 Jan 2021. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa guul muhiim ah ka gaartay naadiga Elche oo ay marti u ahayd ciyaar xiiso badneyd oo ka tirsan horyaalka La Liga. Ciyaarta ayaa ku billaabatay qaab adag, iyadoo labada koox aysan wax gool ah iska dhalin 30-kii daqiiqo ee ugu horreysay ciyaarta. Hase ahaatee, daqiiqaddii […]Sii akhriso
Ra’iisul Wasaare Rooble oo maanta waqti la qaatay Agoonta Booliska ayaa ku baaqay in la caawiyo caruurta agoonta “SAWIRRO”
Soomaaliya January 24, 2021
MUQDISHO-(SONNA)-Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo booqday Xarunta Xannaanada Caruurta Agoonta ee Booliska, halkaas oo uu waqti kula qaatay carruurta agoonta Booliska Soomaaliyeed, ayaa ku baaqay in la garab istaago caruurta agoonta ah. Eng. Rooble oo mid mid u gacan qaaday agoonta ku nool xarunta, lana qadeeyey Sii akhriso
Somalia minster of women and human development opens women’s quota advocacy center at 30%.
Somali News January 24, 2021
Muqdisho(SONNA) The ministry of women and human development for the federal government of Somalia led by H.E Hanif Mohamed Ibrahim (Habsade) has successfully implement a new center for the aim of advocating women’s quota at 30% in Mogadishu for the first time ever. A highly organized opening event was attended by Hanif (Habsade) the minster […]Sii akhriso
(Manchester) 24 Jan 2021. Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Manchester United iyo Liverpool ee tartanka FA CUP ayaa la shaaciyey Kooxda Manchester United ayaa soo dhaweyn doonta naadiga Liverpool si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan tartanka FA CUP. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ee ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Manchester United […]Sii akhriso
(Elche) 24 Jan 2021. Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Elche iyo Barcelona ee horyaalka La Lig ayaa la shaaciyey Kooxda Elche ayaa soo dhaweyn doonta naadiga Barcelona si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan horyaalka La Liga ee dalka Spain. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ee ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Elche […]Sii akhriso
(London) 24 Jan 2021. Chelsea ayaa guul ay u qalantay ka gaartay kooxda Luton Town oo marti ugu aheyd garoonka Stamford Bridge, kaddib markii ay kaga adkaatay 3-1, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada wareega afaraad ee tartanka FA Cup-ka. Qeybta hore ee dheesha ayeey labada kooxood Chelsea iyo Luton Town ku kala nasteen 2-1. Daqiiqadii 11-aad […]Sii akhriso
Madaxweynaha Galmudug oo kulan la qaatay James Swan “SAWIRRO”
SAMAREEB(SONNA)-Madaxweynaha Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayo Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay Mudane James Swan iyo qaar ka mid ah madaxda Hay’adaha Qaramada Midoobay sida Hay’adda Cunada Aduunka ee WFP iyo Barnaamijka Horumarinta ee UNDP. Madaxweynaha Galmudug ayaa waxaa kulanka ku Sii akhriso
Wasiirka Gaashaandhigga oo kormeeray Taliska ciiidanka Cirka xoogga Dalka Soomaaliyeed ‘SAWIRRO”
MUQDISHO-(SONNA)-Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa maanta kormeer shaqo ku tagay taliska ciidanka cirka xoogga dalka Soomaaliyeed. kormeerkaan shaqo ee uu Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadd Federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ku tagay taliska ciidanka Cirka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Afisooni Sii akhriso
(Turin) 24 Jan 2021. Juventus ayaa garoonkeeda Allianz saddexda dhibcood kaga qaadatay kooxda Bologna, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-0, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada toddobaadkan ee horyaalka Talyaaniga. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kal nastay 1-0 ay ku hoggaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Juventus. Daqiiqadii 15-aad Juventus ayaa hoggaanka u qabatay Sii akhriso